10 Sababaha loo Sameeyo Shahaadada Maqal Soomaliya
Faa'iidooyinka Shahaadada Mucaawadeed ee Scrum
1. Hesho saldhig adag oo ah xogta Scrum
2. Bedelida maskaxdaada
3. Waad sii jiri doontaa oo soo jiidaneysaa
4. Shahaadada Mastareynta ee Skum waxay faa'iido u leedahay ururka
5. Saameyn ku yeelashada ururkaaga si uu u qaato habka Agile
6. Si fiican ula shaqee asxaabtaada
7. Muuji xaruntaada xogta kuxirta ardayda
8. Ku biir koox khubaro ah oo khayaali ah
9. Mashaariicda la shaqeeya shaqaalaha aqoonta leh
10. Astaanta ixtiraamka
Waqtiga Lagu Sameeyo Master Master Scrum
Noqo Master of Scrum
Isku duubku waa qaab toos ah oo muujinaya wada shaqaynta, waraaqaha iyo isgaadhsiinta mashaariic adag. Waxay u saamaxdaa kooxaha in ay is-xalliyaan oo ay si degdeg ah u soo saaraan, si waafaqsan mabaadi'da agagaarka ah.
Waa nidaam caan ah oo loo adeegsado aduunka oo dhan SMEs iyo kuwa caalamiga ah; Ururada sida Spotify, Microsoft iyo Ericsson dhamaantood waxay isticmaalaan Digo. Iyadoo aan loo eegin haddii aad ku cusub tahay Scrum, ama hadda sida khabiir ku salaysan, halkan waa faa'iidooyinka 10 ee shahaadada Hurumarka Hurumarka:
Hel saldhig adag oo ah barashada Scrum
Is beddel habdhaqankaaga
Waad sii jiri doontaa oo soo jiidaneysaa
Shahaadada Mastaraynta ee Skum waxay faa'iido u leedahay ururka
Saameyn ku yeelashada ururkaaga si uu u qaato habka Agile
Si fiican ula shaqee asxaabtaada
Muuji xaruntaada xogta kuxirta ardayda
Ku biir koox khubaro ah oo khayaali ah
Mashaariicda la shaqeeya shaqaalaha aqoonta leh
Baaritaan ku saabsan mashaariicda 5,400 IT wuxuu ogaaday in qorshaha kharashka badanaa uu badanaa ku guuleystey 45% marka la eego hawsha qabashada. Markaad ku soo biirto khabiir ku yaala Scrum, waxaad ka fogaan doontaa kuwan yar yar oo kor u qaadaya tallaalka mashaariicdaada si wax ku ool ah iyo waqtigii loogu talagalay.
Koorsooyinka Masters Master iyo shahaadooyinka waa la heli karaa, weli qaar ka mid ah, faa'iidooyinka aan si dhakhso ah u cadayn. Akhri si aad u hesho faa'iidooyinka Shahaadada mashiinka digirta.
Marka aad fursad u hesho inaanad ku dhicin Scrum, fulinta shahaadada ayaa muujin doonta awoodaada la rajeynayo in ay si guul leh u adeegsato. Fursad ka baxsan ururadaadu waxay bilaabeen in ay fuliyaan habka Scrum oo aad uqalantid, dhammaystirida shahaadada Hurumarka Macaamiisha waxay sii wadi doontaa saldhiga xogtaada.
Si wax ku ool ah ayaa loo soo maray? Hirgelinta shahaadada mastarka Scrum ayaa buuxin doonta meel kasta oo aad ku hayso macluumaadkaaga Scrum. Wax kasta oo la tixgeliyo, waa inaad ka fekereysaa qayb kasta oo ka mid ah Scrum si aad u dhaafto imtixaanka shahaadaynta.
Isku duubku waa nidaam qoto-dheer oo aad u isticmaali kartid waa inaad noqotaa inaad maskaxda ku jirto. Qaybta ugu muhiimsan ee habka is-maamulidda iyo midab-takoorka ah waa koox leh maskax ahaan.
Diyaargarowga iyo shahaadada waxay u ekaan doontaa mawduucan naftaada iyo lammaanahaaga. Koox ahaan waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku fekerto waddo aad u qoto dheer, taas oo keenaysa is burin yar, xirxirnaan koox kooxeed iyo mashaariic fara badan.
Shahaadooyinka ayaa ah habka ugu wanaagsan ee lagu xayeysiin karo madaxyada waxayna u muujiyaan lamaanayaasha iyo agaasimayaasha in aad si buuxda u fahamto beerta la siiyo.
Shahaadada Master-ka ee Scrum ayaa kor u qaadi doonta furahaaga xirfadeed ee urur kasta oo isticmaala hab dhaqameedka. Shahaadada waxay kaloo ku tusaysaa inaad leedahay dabeecad qoto-dheer iyo wax-barasho badan oo ah barashada agile, oo ku xiran urur kasta ama warshad isticmaalaysa xirfadahan.
Qaadashada habab kale ayaa ah doorasho weyn oo ganacsi kasta ah maxaa yeelay waxay saameyn ku yeelataa dhammaan ururrada: dadka, hababka, macaamiisha iyo maamulka.
Dhammaan xariiqyadaas, waa lagama maarmaan u ah dhamaan daneeyayaasha in aad ku guuleysan kartid faa'iidooyin dhab ah oo faa'iido leh. Iyadoo qorshooyin dheeri ah oo soo noqnoqonaya oo dib loo celin karo, kooxo is-daba-galaya, Saalax ayaa si dhab ah u caqli-celiya arrintan.
Si kastaba ha noqotee, maqnaanshaha Waxbarashada xayeysiinta waxaa laga yaabaa inaanay keenin natiijooyinka wax ku oolka ah ee maaraynta ay u riixeyso. Haddii aan shahaado lahayn iyo barashada aasaasiga ah waxay kor u kacday nidaamka shahaadaynta, waxaad waayi kartaa daaqada muhiimka ah si aad u hesho Qulqulka dhulka gudihiisa.
Maareynta waxay dareemi doontaa khayraad wanaagsan oo wanaagsan oo lagu galo habka Scrum haddii ay jiraan khubaro khibrad leh oo hadda ah. Shahaadada Hurumarka MS ayaa muujinaysa maareynta inaad diyaar u tahay inaad fuliso habka Scrum.
Shahaadada Hurumarinta Hurumarka waxay yeelan doontaa natiijo faa'iido leh oo la xidhiidha la shaqaynta asxaabtaada. La xaqiijiyo kuwa aad la shaqeysid iyo wadajir ahaanba aad ku dhejin doontid oo aad ku xoojinayso erayo la mid ah iyo fahamka aasaasiga ah ee walxaha sawirta ee ganacsigaaga gaarka ah.
Iyadoo aan loo eegin haddii aadan qaadan kooraska isku midka ah ee loo yaqaan "Scrum" oo ah asxaabtaada, inkastoo wax kasta oo aad faa'iido u yeelan doonto. Baraha kasta ee isku dhejinta ayaa isbedelaya qaabka ay u baranayaan iyo waxa aad ogtahay way kala duwanaan doontaa. Waxaa laga yaabaa inaad xoogga saartey qeybo kala duwan ee Scrum.
Ugu dambeyntii, waxaad lahaan doontaa awoodda aad udoonayso inaad fahamto fahamka isbeddelka badan ee Scrum iyo habka qotodheerka.
Certum Master Certificate waxay u muujineysaa dadka aad la wadaagtay in aad maalgashatay farsamoyinka, oo loo yaqaan Scrum oo bartay in ay ku dhex adeegsato ururkaaga.
Ma jirto sabab ku kalifeysa inaad ku fariisato saaxibbada diidmada ah ee aad taqaano alaabtaada - aad haysatid shahaado si aad u muujisid.
U diyaarso Master Scrum Master oo aad ku biiri doonto koox ka mid ah khubarada gawaarida la dareemay oo diirada saaraya isbeddelka joogtada ah iyo habka deegaanka.
Scrum.org waxay muujineysaa nidaam caalami ah oo xirfadleyaal ah iyo tababarayaal. Kooxdan kooxdani waxay ku buuxsantaa maktabadda macluumaadka, habka lagu ogaanayo dhacdooyinka iyo meel ay ku helaan (iyo u dhiibaan) jihada.
Haddii ay dhacdo in aad ku tartamayso inaad ku guuleysato mashaariicda, koox ka mid ah kuwa lagu magacaabo Scrum Masters waa abaalmarin weyn. Macaamiishaada ayaa laga yaabaa inay u arkaan qiyaasta koox ah oo labadoodaba wada shaqeyn kara oo isticmaali kara Scrum hab awood leh.
Shahaadada waa calaamad muujinaysa ixtiraamka ay tahay in la xirxiro. Intaa waxaa dheer, haddii aad ku jirto maamulka, helitaanka wakiiladaada u diyaargaroobay oo ay caddeeyeen shaqadaada iyo dareenkaaga waajibaadkooda xagga waxbarashadooda. Waxaad ka heli doontaa shaqaale dheeraad ah oo bartayasha ah oo ku walaacsan inaad ku daboosho waxqabadkooda cusub.
Sida ugu weyn, "fursadda aad u maleyneyso inaad soo iibsanayso qof, u diyaar gareynta iyo u fasaxidda waa qaali, qaadashada saxeexa iyaga oo aan qandaraas lahayn, u diyaarineynin iyo in ay sii joogaan."
Noqo a Master Master Scrant oo kaliya 2-maalmood oo ku saabsan kooraska casriga ah ee Teknolojiyada "Innovative Technology Solution". Waxaad isku diyaarineysaa laba xawaarida oo aad farsameysid baaritaankaada markaad diyaarinaysid - ku-xigeenka khabiiro iyo kooxo u baahan in si dhakhso ah wax looga qabto Scrum.
Dhuxul - Naqshadaynta naqshadaynta bilaashka ah
Isbarbardhiga u dhexeeya PRINCE2 iwm